ओली सरकारका चुनौती र सम्भावनाका राजमार्ग | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / ओली सरकारका चुनौती र सम्भावनाका राजमार्ग
ओली सरकारका चुनौती र सम्भावनाका राजमार्ग
Posted by: युगबोध in विचार March 11, 2018	0 117 Views
पृष्ठभूमि ः अने कन शंका उपशंकाबीच प्रचण्ड ने तृत्वको सरकारले स् थानीय तहको निर्वाचनको शुभारम्भ ग¥यो , जसले संविधान कार्यान्वयनको राजमार्ग तय गरिदियो भने अस् िथरताको बादल हटाउन सहयो ग ग¥यो  । अन्ततः कथित मधे श आन्दो लन से टब्याक भयो  । पहिलो चरणको निर्वाचन सके र प्रचण्डले दे उवालाई सत्ताको सा“चो दिए, बाध्य भएर दे उवा दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरे पछि मुलुक नया“ मो डमा पुगे को हो  । माओ वादी बै शाखीमा बने को दे उवा सरकारले अन्ततः तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरे को हो सर्वत्र दबाबपछि । दे उवाको कारण पटक–पटक मुलुकले ठूलो क्षति बे हो रे को इतिहास लभभग यसपटक दो हो रिन पाएन । माओ वादीको बै शाखीमा निर्माण भएको दे उवा सरकारले मंसिर १० र २१ लाई प्रतिनिधिसभा र प्रदे श सभाको निर्वाचन तय गरे पछि मुलुक नया“ शिरामा प्रवे श मात्रै गरे न, असो ज १७ गते को नया“ राजनीतिक परिघटना नै जन्माइदियो  । अनपे क्षित राजनीतिक घटनाक्रमले दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकरण गर्ने नया“ उद्घो ष भएपछि मुलुकमा स् िथरताको संके त दे खिएको हो  । कम्युनिष्ट विभाजनको आडमा सत्तामा बुर्कुशी मारे को कांग्रे सलाई दुई कम्युनिष्ट पार्टीको चुनावी तालमे लस“गै पार्टी एकीकरणको प्रसंगले भुइ“चालो नै ल्याइदियो  । सधै फूटमा रमाउने कम्युनिष्ट फुटकरहरु जो डिने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समे त नया“ तरंग पै दा भयो  । आम जनतामा राजनीतिक स् िथरताको शुभ संके त दे खियो  । सधै विवादमा ते रो र मे रो नाममा लडामति गर्ने हरु एक भएर एउटै व्यानरमा, मंसिरे सिजनको चुनावमा जनताको घरदै लो मा पुगे पछि अथाह मत दिए नागरिकले र वामपन्थी शक्तिहरु सुविधाजनक मतका साथ सिंहदरबार प्रवे श गरे का हुन् । सुविधाजनक मत प्राप्त भएपछि मुलुकमा लगभग राजनीतिक अस् िथरताको अन्त्य त हुने नै भयो भने संक्रमणकालको समे त अन्त्यको शुभारम्भ गरिदियो चुनावी परिणामले  ।
भारी मत नै बामपन्थीलाई कसरी ः ओ लीको राष्ट्रवाद नै मुख्य कारण थियो , वामशक्तिहरुले अत्यधिक मत पाउनु, दो स्रो कम्युनिष्टहरुको एकतापछि दे शमा स् थायित्व र समृद्धि संभव छ भन्ने जनताले राम्रो स“ग बुझे का थिए । ते स्रो राष्ट्रियताको पक्षमा कांग्रे सले बे इमानी गरे कै थियो  । ६ महिना भारतीय नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी हो इन भन्ने कांग्रे सी जनलाई निर्वाचनमा जनताले लज्जास् पद हार गराइदिए भने वामशक्तिलाई अत्यधिक मत दिएर पा“च वर्षको लागि सत्ताको चावी उपलब्ध गराइदिएका हुन् । विशे ष गरी पार्टी ने तृत्वमा पुगे पछि ओ लीले दे खाएको राष्ट्रिय स् वाभिमानको अडान, छिमे कीसगै मित्रराष्टस“गको समदुरी सम्बन्धको प्रस् तावका साथै घरे लु मनो विज्ञानमा ओ ली पूर्णरुपमा भिजिसके का थिए । ओ लीले राष्ट्रियताप्रति दे खाएको अडानले अन्ततः भारतीय शासकवर्गहरु पनि गलिसके  । हिजो भारतको ने पालप्रतिको हे राइ र आजको हे राइमा क्रमशः १८० डिग्रीतर्फ उन्मुख हुदै छ । यसको गतिलो उदाहरण ओ लीको सत्तारो हण अगावै मो दीकी विशे ष दूत सुषमा स् वराजको ओ ली दर्शनले नै पुष्टि गरिसके को छ । यद्यपि भो लिका दिनमा ओ ली आफ्नो अडानबाट युटर्न हो लान् या नहो लान् त्यो भावी समयले नै बताउला, आजको घडीसम्म ओ लीले दे खाएको राष्ट्रियताको पक्षमा कडा अडान र घरे लु जातीय, क्षे त्रीय विखण्डनको विपक्षमा उनको अडान नै लो कप्रिय मतको आधार हो  ।
राष्ट्रियताको पक्षमा अडिग ओ ली ने तृत्वको वाम शक्तिलाई जनताले सार्वभौ म मत जाहे र गरे र पा“च वर्ष सत्ता सञ्चालनको वै धानिक बाटो खुला गरिदिएका छन् । राजनीतिक अस् िथरताले सधै विषम बने को अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधारस“गै जनताको आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने दायित्व र जिम्मे वारी उनै को हो  । भ्रष्ट कर्मचारी संयन्त्र, दलाल अर्थतन्त्रलाई सङ्लो बनाउ“दै मौ लिक समाजवादको यात्रा तय पनि उनै ले गर्नुपर्ने छ । यसर्थ ओ ली राष्ट्रियताको अडानमा जति दर्विलो गरी उभिए, अब पू“जीवादको चरम विकास गरी समाजवादको राजमार्ग को र्ने अवसरको पनि उनले सदुपयो ग गरे र कुशल राजने ताको इतिहास ले ख्ने अवसर पनि उनै लाई जुरे को छ ।
ओ लीको चुनौ ती ः ओ ली सरकारको मुख्य दायित्व र जिम्मे वारी स् िथर सरकारको चावीले आर्थिक समृद्धिको राजमार्ग को र्नु नै हो  । उनीस“ग भएको एकसूत्रीय एजे ण्डा नै यही हो , यद्यपि ओ लीले समृद्धिको सूत्रलाई सै द्धान्तिकरुपले जति बाचा गरे का छन्, त्यो व्यवहारिकरुपले कति कार्यान्वयन गर्न सक्लान् त भन्ने मूल प्रश्न हो  । यही मूल प्रश्न नै उनको अगाडिको चुनौ ती हो  । ओ लीको पछिल्लो भूमिकाको विषयमा राजनीतिक विश्ले षक प्रा डा. सुरे न्द्र के सीले ओ लीको अडान सकारात्मक भए पनि कति टिक्न सक्छ, त्यो हे र्न भने बा“की रहे को टिप्पणी गर्दछन् । विशे षगरी पात्र भन्दा पनि पात्रता महत्वपूर्ण हुने भएकाले ओ लीले पात्रताको अभिनय गर्न सके , कुशल राजने ता बन्ने अवसर इतिहासले दिने उनको मत छ ।
समृद्धि एउटा स् तर हो मानक हो , जहा“ गुणस् तरीय मानवीय जीवनसगै आर्थिक वै भव समे त उपलब्ध हुने गर्दछ । समृद्धिको यात्रामा समाजको विकराल आर्थिक विभे दका डो बहरु बिस् तारै पुरिदै जान्छन् भने गरिबी र अभाव प्रायः न्यून हुने गर्दछ । मुलुक संघीयतामा गइसके को अवस् थामा पूर्वाधार विकास मात्रै हो इन दै निक प्रशासन सञ्चालन नै कठिन छ । सामान्य खर्च प“ूजीगत खर्च भन्दा बे सी हुने संके त दे खिएका छन्, राष्ट्रिय आयका दायराहरु निकै कम छन् । आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिताबिना सुशासन र समृद्धि असम्भव जस् तै छ ।
संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने वाक्यांशले निर्दे श गरे को छ कि मुलुक अब समाजवादतर्फ बाटो तय गर्ने छ, यद्यपि समाजवाद आउनका लागि मुलुकले धे रै आर्थिक घुम्तीहरु त पार गर्नै पर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय संकल्प पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । समृद्धिको दिशातर्फ मुलुकलाई लै जाने हो भने यी गन्तव्यसम्म पुग्ने हाम्रा आर्थिक अवयवहरु के –के हुन् त ? हाम्रो आर्थिक नीति कस् तो हुन्छ त ? विद्यमान दलाल पू“जीवादी अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय पूजीवादी अर्थतन्त्रले विस् थापन गर्न सक्ला त ? यद्यपि राष्ट्रिय पूजीवादी अर्थतन्त्रको विकास गरिनुपर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस् ताव गरे का छन् । के खतिवडाले भने जस् तै दलाल पू“जीलाई राष्ट्रिय पू“जीमा रुपान्तरण गर्न सम्भव छ त ? पू“जीको चरम विकासविना समाजवाद त संभवै छै न । समाजवादमा पुग्नको लागि पूजीवादको विकास गर्नुको अर्काे विकल्प छै न । यतिमात्रै हो इन प्रधानमन्त्रीले पा“च वर्ष सदुपयो ग, समृद्धिको वर्ष भने का छन् । हाल मुलुक निरपे क्ष अर्थात छाडा बजार अर्थतन्त्रको नियन्त्रणमा छ ।
राज्य कमजो र हदा निजी क्षे त्रको चर्काे दादागिरी छ । मुलुकको परनिर्भरता ९५ प्रतिशत बढे को छ । आयात ९५ प्रतिशत छ भने निर्यात ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । विगतका सरकारले गरे का आर्थिक अनुशासन उल्लंघनले मुलुकको अर्थतन्त्र निकै विषम बने को छ । पू“जीगत खर्च ६ महिना यता ३० प्रतिशतको हाराहारीमा समे त पुग्न सके को छै न । विकास आयो जनाहरुको गति कछुवा तालमै छ । असारे बजे टको रो गबाट मुक्त छै न हाम्रो मुलुक । यद्यपि अर्थमन्त्रीले असारे बजे टको बे थिति रो क्न अहिले दे खि नै एक्सन त शुरु गरे का छन् यो कति परिणाममुखी हो ला त ? यतिमात्र हो इन दे उवा सरकारले बजे टमा नसमे टिएका तर ठाडो आदे शमा मनपरी पै सा बा“ड्ने कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्रीले रो क्ने प्रयास गरे का छन् । दे उवा सरकारको स् वे च्छाचारी व्यवहारले थिलो थिलो बने को अर्थतन्त्रलाई सुधार्न नीतिमै सुधारको खा“चो हुने अर्थविद डा. डिल्लीराज खनालको प्रतिक्रिया छ । महतले लादे को निरपे क्ष निजीकरणले मुलुकको राष्ट्रिय उद्यो गहरु ध्वस् त हुनुको साथै परनिर्भरता बढे को खनालको टिप्पणी छ ।
विप्रे षणले ने पालको अर्थतन्त्र जे नते न गुजारिएको ले यसको विकल्पमा नया अर्थनीति लागु गर्न नया सरकार सफल हुनुपर्ने खनालको सुझाव छ ।
प्रजातन्त्रको पुनस् र्थापनापछि ने पालमा निजीकरण ऐ न २०५० आयो , ऐ न आएपछि निजी अस् पताल, निजी बै क, निजी स् वास् थ्य, निजी शिक्षण संस् था सञ्चालनमा समे त आए । जसले से वा सुविधा पनि दिए तर मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडो र सीमित दलाल वर्गका पहु“चमा मात्रै पुग्यो  । आइएमएफ र विश्व बै ंकको सिकायतमा महतले लादे को नीतिका कारण यतिबे ला जुनसुकै अवयवहरु अस् िथर बने का छन् । यद्यपि २०४६ को पूर्वसन्ध्यामा प्रतिव्यक्ति आए १९० अमे रिकी डलर थियो भने सन् २०१७ को अन्त्यसम्म आउ“दा करीब आठ सय अमे रिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको तथ्यांक छ । औ सत गरिब ४२ प्रतिशतबाट घटे र २३ प्रतिशतमा पुगे को छ । गत वर्ष आर्थिक बृद्धिदर करीब ७ प्रतिशतमा पुगे को थियो  । यद्यपि आर्थिक बृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय बृद्धिले मात्रै आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दै न ।
सम्भावनाका राजमार्ग ः राजनीतिक अराजकताको आडमा आर्थिक अराजकताले मुलुक थिलो थिलो भएको बे ला ओ ली सिंहदरबारको चाबी लिएर सत्तारो हण गरे का छन् । सबै तिर बिग्रे भत्के को मुलुकलाई सही राजमार्गमा हि“डाउन उनीस“ग जति चुनौ तीका पहाड छन् त्यत्ति नै अवसरका राजमार्गहरु पनि छन् । यसर्थ विद्यमान डामाडो ल बने को अर्थतन्त्रलाई सही बाटो मा ल्याउन मात्रै हो इन सात दशक लामो जनअपे क्षा पूरा गर्ने चुनौ तीस“गै कुशल राजने ताको इतिहास ले ख्ने संभावनाका राजमार्ग पनि उनीस“गै छन् । भारतीय शासकवर्गका अगाडि राष्ट्रिय स् वाभिमानका साथ अडिग भएका ओ लीले यसपटकको मन्त्रीमण्डलमा, पात्र भन्दा पनि पात्रता भएको एक कुशल अर्थशास् त्रीलाई अर्थमन्त्रालयको बागडो र हात लगाएका छन् । उनले ल्याउने यो जना र कार्ययो जनाको मार्गचित्रले मुलुकको समृद्धिको भविष्य निक्र्याै ल गर्दछ ।
नेपालको मौ द्रिक नीतिमा एक कुशल व्यवस् थापकको भूमिका निर्वाह गरे का डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रालयको चाबी समाएका छन् । मुलुकको जर्जर बने को अर्थतन्त्रलाई सही गो रे टो मा ल्याउदै समाजवादको यात्रा तय गर्ने आधार उनै को जिम्मामा छ । समाजवादी दृष्टिको ण राख्ने अर्थशास् त्रीका रुपमा हे रिने डा. खतिवडाले नया“ अर्थनीति ल्याउनुको साथै सो हीअनुसारका उत्पादनमूलक कार्यक्रम ल्याउने ल्याकत राख्नै पर्छ । यसर्थ राष्ट्रियताको अडानको कारण सुप्रिमो बन्ने सौ भाग्य पाएका ओ लीले भने जस् तै उद्यमको विकास गरी रो जगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । विशे ष गरी ने पालको अर्थतन्त्रको आधार भने को नै कृषि, पर्यटन र जलविद्युत नै हो  । हाल कृषिले करीब ३६ प्रतिशत, पर्यटनले ५ प्रतिशत यो गदान गरे े को सरकारी तथ्यांक छ । कृषिमा उद्यमसहितको आधुनिकीकरण, पर्यटनमा नया“ यो जनाका साथमा प्रवद्र्धन र जलविद्युतमा स् वदे शी तथा विदे शी लगानीको सुनिश्चितता गर्न सके मुलुकको आर्थिक अवयवहरुमा नया“ प्रभाव दे खिने छ, यतिमात्र हो इन ओ लीले उद्यमबिना आर्थिक समृद्धि सम्भव नभएको उद्घो ष गर्दै आएका छन्, उनले उद्घो ष गरे अनुसार कार्यक्रमिक यो जना हुबहु लागु गर्न सके मुलुक भिन्न अवस् थामा पुग्न कुनै आइतवार कुर्नुपर्ने छै न ।
Previous: राष्ट्रियसभा मानको खातिर मानका लागि मात्र
Next: रुढीवाद र संवेदनहिनताको पराकाष्ठा